Standard iyo Qawaaniinta - Ningbo Sunsoul
Standard iyo Siyaasadaha
propulsion Strong waxaa had iyo jeer ka yimid a muhiimka ah gudaha xoog leh.
xeerarka shirkadaha firfircoon oo wax ku ool ah Sunsoul yihiin aasaas u ah si weynna u kobcay shirkadda. The-shaqada adag iyo dadaalka shaqaalaha ee Sunsoul sannado badan lagu soo koobi karaa shan heerka shirkadaha hoos ku qoran, kuwaas oo ka caawiyey in ay kor u koritaanka shirkadda ee dhinacyo kala duwan sida cilmi-baarista iyo horumarinta, qiimaha, faa'iidooyinka iskaashi, koritaanka shaqaalaha iyo shirkadaha mas'uuliyadda.
• In kor loo qaado tartan Customer
Macaamiisha waa furaha guusha our. Waxaan la macaamiisheena wadaagaan waayo-aragnimadooda iyo bixiyaan xal dhamaystiran si ay u gaarto himilooyinkeeda ay si karti iyo hufnaan.
• Innovation ku hogaamiyay inay Future
Innovation waa dhiiggoodana. Waxaan si guul rajada galay teknoolajiyada iyo alaabta. qarkiisa Our goynta waa hal-abuurka iyo waayo-aragnimada.
• In kor loo qaado Company Value
Waxaan dhalin koritaanka faa'iido ah si loo hubiyo guul waarta soo abaabulo our faylalka ganacsiga isku dheeli tiran. Waxaannu ku dadaalnaa in si kaamil ah oo ku eryan heer sare ah.
• Ogow Dream ee Shaqaalaha
Shaqaalaha Heer ayaa aasaas u ah guusha our shirkadda ee. dhaqanka Our shirkad lagu gartaa adkeysiga, hufnaan iyo is xushmayn. Waxaanu ku dhiiri shaqaalaha in ay qaataan lahaanshaha iyo wada koraan leh shirkadda.
• ay qaataan Masuuliyada Bulshada
Waxaan ku hawlan yihiin kor u qaadida habka horumarinta bulshada iyada oo loo marayo horumar, talooyin iyo teknoolajiyada cusub. Waxaa naga go'an in qiimaha universal, dhalashada shirkadaha wanaagsan iyo deegaan caafimaad qaba. Integrity hanuuniyo habdhaqan xagga our shaqaalaha, ganacsatada iyo saamileyda.
Siyaasadda Tayada: Xaraaradda for Excellence
• Loo Dulqaadanayn Zero cillado
hawlaha lagu faray xagga Jeedsada adag ee failure kasta oo alaabooyinka iyo geedi socodka our. Waxaan ka fiirsan Zero ku macneysey sida gool macquul ah. Annagaa u gargaari hagaajinta nidaamka wax soo saarka iyo geedi socodka.
• Ku qanaca Customer
hawlaha waa macaamiisha diiradda waxaana naga go'an in la abuuro iskaashi guul tan iyo bilowgii, ka codsanaya mashruucan wax ku ool ah iyo ka shaqeynta maamulka in sahayda mugga, oo dhan meertada nolosha ah.
Our mabda 'ee ganacsiga waa in si joogto ah loo hagaajiyo our tartan. Lahaanshaha qoto-dheer xidid-Jidka falanqaynta by codsanaya PDCA iyo Lix qalab tayo li'idiisa, horumar degdeg ah oo nidaamsan si ay wax soo saarka iyo habka, habka xilgudashada ugu habboon la wadaago iyo sidoo kale tabo cusub waxaa aasaas u ah tayada iyo wax soo saarka kordhaya.
• ganacsi Ruuxa, siinta & Involvement
• Waxaanu ku dhiiri ganacsiga ruux, awood siinta iyo ka qaybgalka shaqaalahayaga by joogto ah oo nidaamsan horumarinta iyo isticmaalka aqoontooda, waayo-aragnimo iyo xirfado.
• Deegaanka, Caafimaadka Shaqada iyo Siyaasadda Ammaanka
• Waxaan mas'uul ka nahay deegaankeena yabooha saaxiibtinimo, u hoggaansan by sharciga iyo kale oo looga baahan yahay, iyo sidoo kale la abuuro goob shaqo oo ammaan iyo caafimaad u leh dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya wakhti kastaba.
• Kor u qaadidda wacyiga shaqaalaha ee ammaanka iyo caafimaadka, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa dhammaan shaqaalaha inay ka qaybgalaan hawlaha la xiriira ammaanka iyo waxbarashada caafimaadka.
• Waxaan u qiimeeyaan saamaynta ay suurto gal deegaanka ee marxaladaha hore ee wax soo saarka iyo horumarka. Waa goolkii our si looga hortago ama loo yareeyo wasakhaynta.
• Waxa kale oo aanu yareeyo wasaqda jirey iyo wasakhda rididada in nidaamka wax soo saarka, iyada oo loo marayo horumar joogto ah in dhammaan shaqaalaha ku hawlan yihiin.
• Si loo hubiyo jawi shaqo oo ammaan ah, caafimaad qaba oo lagu kalsoonaan karo waa qayb ka mid ah mas'uuliyadda ka saaran bulshada.
Cinwaanka: No.360.Qiushi Road, Haishu Zone, Ningbo, Shiinaha